Ukuphupha inkaba Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Isisu okanye inkaba yindawo ephakathi embindini wesisu. Kuba inkaba ikwindawo ephambili emzimbeni womntu, ihlala ithathwa njengeziko leemvakalelo lomntu. Ngaba isimboli yephupha ibhekisa kwiziko elingaphakathi lephupha okanye lifihlwe ngakumbi emva kwalo? Ingaba iphupha elinje lifuna ukusixelela ntoni? Ngaba uyakwazi ukutolika kwamanye amaphupha?
1 Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "inkaba" kubhekiswa kuyo ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. Ukuxhomekeka kwindawo yokunxibelelana. Nangona kunjalo, ezi azikhatshwa ziimvakalelo ezintle, umzekelo, uphawu lwephupha lunokubhekisa kubudlelwane bothando nentiyo. Okanye unokuzimela ngasemva kolwalamano oluphazamisekileyo nonina.
Ukuba iphupha liyakuqonda oku kuxhomekeka kokubi phakathi kwabantu ngephupha lakho, kuya kufuneka uzame ngoku el mundo ukuvuka ukhululekile koku. Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela ngoncedo lobungcali lonyango lwengqondo.
Ngokubanzi, ukubona isisu sakho okanye omnye umntu ubhekisa kubo. Indawo yokujonga ukusuka ekuphupheni ngaphakathi kwakho ngaphakathi okanye kwilizwe elingaphandle. Iphupha elinjalo lidla ngokufuzisela imbono yomzimba wakhe kwihlabathi lokuvuka.
Ngamanye amaxesha "inkaba" isimboli yamaphupha ikwanyanzela umphuphi ukuba aphonononge ngokusondeleyo ukungonwabi kwakhe ngaphakathi okanye azimisele ngemfihlo yangaphakathi. Intlungu yenkaba ephupheni itolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njenge ukungathembi ngokubhekisele kwilungu losapho kubomi bokuvuka. Inkaba ngokwayo njengophawu lwephupha ifuna ukwenza umphuphi azi ukuba usapho lwakhe luyamthemba. Akufanele ikuphoxe ngezenzo zakho kwilizwe leewotshi.
Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, iphupha lifumana kunye nesimboli yephupha «inkaba» isalathiso sayo isimilo sokuzingca kwihlabathi lokuvuka, kuba uzijonga njengoyena ubalulekileyo, ngengqondo, "inkaba yehlabathi." I-subconscious yakho ngoku ifuna ukukubonisa ngephupha lakho ukuba umlinganiswa akananto yakwenza nokuzingca. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge indlela oziphatha ngayo kwihlabathi eliphaphamayo kwaye ugcine ukuthanda kwakho ngaphakathi kwemida.
Ukubona kwenkaba yakho ephupheni nako kunako indawo yeemvakalelo yamaphupha kwaye afanekisela isihlalo samandla akhe. Nangona kunjalo, ukuba usathana okanye umzobo ofanayo uhleli kwinkaba yephupha kubusuku obubi, kuya kufuneka ukuba wazi uloyiko lwakho. Kuya kufuneka ujongane nezi kwilizwe elivukayo kwaye ufumane izizathu zazo. Kungoko kuphela apho uya kukwazi ukoyisa kwaye uzicwangcise.
Uphawu lwephupha «inkaba» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "inkaba" luquka Indawo yokudibanisa phakathi kwenyama nokomoya.